यो सामान्य छ कि एक वा दुबै पक्ष आफ्नो केसको फैसलासँग असहमत छन्। के तपाईं अदालतको फैसलासँग असहमत हुनुहुन्छ? त्यसोभए त्यहाँ यस निर्णयलाई अपीलको अदालतमा अपील गर्न एक विकल्प छ। यद्यपि यो विकल्प नागरिक मामिलामा EU १,1,750० भन्दा कमको ब्याजको साथ लागू हुँदैन। के तपाईं अदालतको निर्णयसँग सहमत हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं अझै अदालतमा कार्यवाहीमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। सबै पछि, तपाइँको समकक्षले अवश्य पनि अपील गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ।
उजुरीहरूको बयान पछि रक्षा को बयान। यसको पक्षका लागि अपीलमा अपराधीले प्रतिस्पर्धा गरिएको फैसलाको बिरूद्ध अगाडि मैदान हाल्न सक्छ र अपीलकर्ताले उजूरीको बयानलाई प्रतिक्रिया दिन सक्छ। उजुरीको बयान र रक्षा को बयान सामान्यतया अपील मा स्थिति को आदान प्रदान समाप्त। लिखित कागजातहरू साटासाट गरेपछि, यो सिद्धान्तमा अब नयाँ आधार प्रस्तुत गर्न अनुमति छैन, दावी बढाउनको लागि पनि होईन। यसैले यो तय गरिएको छ कि न्यायाधीशले अब अपीलको पक्षलाई ध्यान दिन सक्दैन जुन अपील वा बचावको बयान पछि राखिएको छ। यो दावीको बृद्धि गर्न पनि लागू हुन्छ। यद्यपि अपवादको आधारमा पछिल्लो चरणमा पनि मैदान स्वीकार्य छ यदि अर्को पक्षले अनुमति दिएको छ भने यो गुनासो विवादको प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छ वा लिखित कागजात पेश गरेपछि नयाँ घटना उत्पन्न भएको हुन्छ।
अपीलमा कानूनी कार्यवाहीको अन्तिम चरण हो निर्णय। यस निर्णयमा अपीलको अदालतले अदालतको अघिल्लो फैसला सहि छ कि छैन भनेर संकेत गर्दछ। अभ्यासमा, दलहरूलाई अपीलको अदालतको अन्तिम निर्णयको सामना गर्न यसले छ महिना वा अधिक लिन सक्दछ। यदि पुनरावेदनकर्ताको आधारलाई समर्थन गर्छ भने अदालतले लडाईएको फैसलालाई पन्छाएर मुद्दा आफै सुल्झाउनेछ। अन्यथा अपीलको अदालतले तार्किक तवरले लडाईएको फैसलालाई समर्थन गर्दछ।